Ukuthenwa ngemichiza kubadlwenguli abaphindayo kuvunywe ePakistan
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zasePakistan » Ukuthenwa ngemichiza kubadlwenguli abaphindayo kuvunywe ePakistan
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • ulwaphulo-mthetho • Iindaba zikaRhulumente • Amalungelo abantu • iindaba • Iindaba zasePakistan • abantu • Xanduva • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Ukuthenwa ngemichiza kubadlwenguli abaphindayo kuvunywe ePakistan.
Izilungiso ezitsha zazisa isigwebo sentambo okanye isigwebo sobomi bonke kudlwengulo lwemigulukudu kunye nokuthenwa ngekhemikhali kwabophuli mthetho ngokwesondo abaphinda-phindayo, ngemvume yogwetyiweyo.
Ngaphantsi kwe-3% yohlaselo ngokwesondo okanye izimangalo zodlwengulo ePakistan zikhokelela ekugwetyweni.
Ukuba ukuthenwa kweekhemikhali kwabelwa njengesohlwayo, "kuya kuqhutywa ngebhodi yezonyango eyazisiweyo," ngokomthetho omtsha.
IPakistan ijoyina uMzantsi Korea, iPoland, iRiphabhlikhi yaseCzech kunye namanye amazwe ase-US, apho kuye kwaqaliswa ukuthenwa ngemichiza.
Izilungiso ezintsha kumthetho okhoyo, ovumela ukugwetywa ngokukhawuleza kunye nesohlwayo esiqatha ngakumbi kubadlwenguli, baye bavotelwa ngamaLungu ePalamente ePakistan izolo.
Abaphuli-mthetho abagwetywe kumatyala amaninzi odlwengulo ngoku banokujongana nokuthenwa ngemichiza Phakistan njengoko ipalamente yelizwe iwuxhase kakhulu umthetho omtsha oyilelwe ukunqanda ukwanda kolwaphulo-mthetho ngokwesondo.
Ukuthenwa ngemichiza kuchazwe kulo mthetho njengenkqubo apho “umntu enziwa angakwazi ukwabelana ngesondo ngalo naliphi na ixesha lobomi bakhe, njengoko kunokumiselwa yinkundla ngokusetyenziswa kweziyobisi.”
Kucetywe ukuseka iinkundla ezikhethekileyo kwilizwe liphela ukuqinisekisa ukuba izigwebo kumatyala ohlaselo ngokwesondo zihanjiswa “ngokukhawuleza, ngakumbi kwiinyanga ezine.” Ukuba ukuthenwa kweekhemikhali kwabelwa njengesohlwayo, "kuya kuqhutywa ngebhodi yezonyango eyazisiweyo," ngokomthetho omtsha.
U-Mushtaq Ahmed, uSenator weqela lezenkolo le-Jamaat-i-Islami, ngaphambili wayewuchasile lo mthetho njenge-Islamic. U-Ahmed waxoxa ngelithi akukhankanywanga ngokuthenwa kweekhemikhali kumthetho weSharia kwaye abadlwenguli kufuneka baxhonywe esidlangalaleni.
Ngokubhenela kwiziyobisi ukunciphisa i-libido yabaphuli-mthetho abaphindayo, Phakistan ijoyina uMzantsi Korea, Poland, Czech Republic kunye nabanye US ithi, apho kuye kwaqaliswa ukuthenwa kweekhemikhali.
Lo mlinganiso wabekwa etafileni kunyaka ophelileyo nguMongameli wasePakistan u-Arif Alvi ukuphendula kwisikhalo esikhulu sikawonke-wonke malunga ne-spike kwilizwe lonke kumatyala odlwengulo olubandakanya abasetyhini kunye nabantwana.
Emva phayaa, i-Amnesty International yakugxeka ukuthenwa kweekhemikhali njengempatho “ekhohlakeleyo, engenabuntu”, icebisa i-Islamabad ukuba endaweni yoko igxile ekuguquleni inkqubo yayo yobulungisa “enesiphene” kunye nokuqinisekisa ubulungisa kwixhoba.
Ngokwe-NGO yengingqi yeMfazwe eChasene nodlwengulo, ngaphantsi kwe-3% yokuhlaselwa ngokwesondo okanye ukutshutshiswa ngokwesondo ePakistan kukhokelela ekugwetyweni.